Akụkụ nke nkà na ụzụ nke na-eto eto na ụlọ
Mpempe ego nke broilers (ma ọ bụ crosses) na-ejikọta ụdị anụ dị iche iche, bụ ndị kwesịrị ekwesị na-ewu ewu na ugbo ala na oke ugbo. A na-akọwa abamuru nke ịzụlite mmiri na-ebu ọnụ: n'ime ọnwa 2, onye ọ bụla na-ebute ibu arọ. Ịzụlite na ịnọgide na-ebu obe nwere ụfọdụ iche site na ịzụlite nke hens.
Kedu otu esi amalite ehi oke ozu maka anu dika ahia? Atụmatụ na nzukọ nke ikpe ahụ
Ịzụ ehi (oke ehi) n'ụlọ maka ndị na-amalite ịzụ ahịa bụ azụmahịa bara uru, ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume inye ngwaahịa na ezinụlọ, na ihe fọdụrụ iji ree ma nweta uru. Amalite ndị ọrụ ugbo na-eche na ehi ndị na-azụ anụ maka anụ dị ka azụmahịa bụ usoro nsogbu ma dị oke ọnụ. Ma na nzukọ kwesịrị ekwesị na nrube isi na ihe ndị a chọrọ maka nlekọta, azụmahịa ahụ ga-eme nke ọma, na-eweta ego.
Ruo ogologo oge, a na-akpọ ehi na Russia nurse nọọsụ, ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke anụmanụ ndị a magburu onwe ya ka akụ na ụba nke ezinụlọ ndị ala ọgaranya kpebiri. Ọtụtụ agbanweela kemgbe ahụ, mana ịzụ ehi na-azụ anụ na-anọgide na-eduzi ụlọ ọrụ anụ ụlọ. Ọ dị mkpa ka ọ dị mkpa ịmata ụdị nwa na-acha oji na nke na-acha ọcha, ọ natara nkesa dị ukwuu n'ókèala mba anyị, na Ukraine na Moldova.
Otu n'ime umu ehi nke kachasị ewu ewu na nke kachasị ewu ewu n'ụwa bụ Holstein mmiri ara ehi.
Golshtinsky (Holstein-Friesian) ìgwè ehi na-ata ara ehi - otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ndị a ma ama na ụwa. O natara nkesa kasị ukwuu na USA, Canada, ụfọdụ mba Europe, ma ugbu a ọ na-arụsi ọrụ ike n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa. Akụkọ banyere ọdịdị nke òtù Holstein Nke a dị ebube a nwere akụkọ na-akpali mmasị.
Ezigbo ngosipụta nke nrọ ndị ọrụ ugbo - ehi ehi Jersey
Ngalaba ehi nke Jersey, nke a maara nke ọma n'ụwa, bụ nrọ nke onye ala nkịtị nke otu ìgwè dị mma ma dị mma. Ihe nwere ike ime ka ọ bụrụ na ọbụna na ọnọdụ ọjọọ nke Russia nwere ike ịghọ otu n'ime ụdị anụ ụlọ abụba kachasị abụba n'ụwa. Nkọwa mkpirikpi akụkọ ochie a pụtara na agwaetiti Bekee nke Jersey na Channel Channel, nke nyere ya aha.
A na-eji ehi na-eme nri maka ebe ugwu - "Ayshirskaya"
Aishirskoy ìgwè nke ehi na-akwado maka ozuzu na n'ebe ugwu. Ụmụ anụmanụ ndị a adịghị anabata okpomọkụ ma nwee ike ime n'enweghị ezigbo nri. A na-ewere ha dị ka ndị tozuru okè site n'afọ nke abụọ nke ndụ. Akụkọ ihe mere eme Na nke mbụ, ụdị ehi a sitere na Scotland. Ya mere, aha ya si n'aka ndị obodo Scotland.
Nhọrọ dị mma maka onwe ma ọ bụ ugbo - ehi "Simmental" ụdị
Ekọwapụta ọdịdị nke Russian Pestrus site na akụkọ banyere ndị mmadụ na otu onye nke onye Ọstrịa ma ọ bụ onye ọrụ ugbo Belgium bụ na ndị nna nna nke otu ewu ewu na Russia na Europe jupụtara na ahịhịa ala nke Switzerland Alps. Akụkọ ihe mere eme nke umu ahụ Aha a na-akpọ "Ụdị Simmental" bụ nanị ehi nke nwere ụdị ihe nketa ndị nwere nnukwu ọnụ mmiri Bernese Oberland.
Mkpebi magburu onwe ya maka ugbo - Umu uzo nke ehi
Ọ bụrụ na iche iche nke ugbo bụ mmepụta nke mmiri ara ehi, nhọrọ maka nhazi na ịkụpụta Red Steppe ụdị ehi bụ ihe ngwọta dị mma ma dị irè. Ogologo oge, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 200 nke ahụmahụ na ịzụlite na ọrụ zootechnical na ìgwè na-akwado nke a. Akụkọ banyere Red Steppe ụdị ọmụmụ ebe ọmụmụ bụ mpaghara ndịda nke Ukraine.
Ahịhịa siri ike na ndị na-enweghị atụ bụ ndị si England - "Hereford"
A na-eji anụ a na-azụ anụ eme ihe karịa ihe a zụtara, ọ bụ n'ihi na ọ dị mma ma kpọọ ya uru maka ahụike mmadụ. Ndị ọrụ ugbo na-arụ ọrụ nke aka ha n'igbu ehi, na-ahọrọ ime nhọrọ ha maka ụdị anụmanụ ndị ahụ, bụ nke a na-eji ọkwa dị elu maka ọnọdụ dị iche iche nke ihu igwe na arụpụta ọrụ ọma.
A na-ahụ ehi nke ụmụ Yaroslavl site na agba ojii ha. Mmiri ara ha nwere nnukwu abụba, nnukwu calorie. N'ime mmepụta mmepụta ihe, a na-emepụta ihe dị iche iche nke mmiri ara ehi sitere na mmiri ara ehi nke ụmụ Yaroslavl: cheese cheese, cream cream, cheese ... Akụkọ ihe mere eme Ebube Yaroslavl nke ehi na-eri nri na narị afọ nke 19.
Ndị Kholmogorks (nke bụ "Kholmogorskaya" nke ụmụ ehi) na-ewetara ndị na-eto ha na ndị na-ahụ mmiri ara ehi ọṅụ!
N'okwu ahụ bụ "ehi", ọtụtụ n'ime anyị na-ewere ya na ọmarịcha mara mma na-acha ọcha na nke ọcha na nnukwu udịrị. Nke a bụ otú ugwu ugwu - ndị nnọchiteanya nke ìgwè, otu n'ime atọ kachasị ama na Russia, yiri. A na-emepụta ehi na-edozi ahụ na oyi na-atụ, mmiri ara ehi ha nwere nnukwu abụba na uto dị mma.
Ngwakọta ọkụkọ anụ - broilers - dị iche na anụ ndị na-eto eto na-eto eto na umewanye mmepe na obere ego na-eri kwa 1 n'arọ. Igwu ọkụ ọkụ na-eto eto n'ubi a bụ uru dị mma. A na-egbu ha maka anụ mgbe e debere ha maka ọnwa 2.5. Na nlekọta kwesịrị ekwesị, ibu nke ọkụkọ na oge a bụ 1.4-1.6 n'arọ.
Afọ ole ka oke rabbits a na-achọ mma?
Oge na ogologo oge nke ndụ rabbits ruo n'ọtụtụ dị ukwuu na-adabere n'ọnọdụ anụmanụ na ụdị nri. Mana ọ bụghị naanị na ihe ndị a dị oke aka. Ụdị nke ọ bụla nwere kpọmkwem ọnụ ọgụgụ ịdị adị ya. Mmetụta nke ụdị na rabbits Na ọdịdị, rabbits na-adị ala karịa ndị ogbo ha ji achọ.
Ebe ndị dị na ya bụ ihe oriri na-edozi ahụ, nke a na-emetụta anụ nke nnụnụ ndị a na nsen ha a tụrụ atụ. Ọ na-apụta na ịzụlite ha na ụlọ dị mfe, ma na mbụ, anyị chọrọ oghere, nke anyị ga-agbalị ịkọwa. Enwere ike ịkụzi ụgbọ mmiri maka chails, nke plywood na ọbụna plastik, ya mere a ghaghị iji nlezianya lelee ụlọ maka quail, nke dabere na ọdịdị nke ndụ dị mma nke obere nnụnụ.